Shandong Kunda Steel Co., Ltd. waxay leedahay tiro badan oo taarikada birta ah, kuwaas oo laga baaraandegi karo, la gooyn karo, lana soo baakadeyn karo dhoofinta joogtada ah ee badda. Waxaan haynaa mashiinno goynta badan, mashiinno fidiya, iyo mashiinno ciideed si loo daboolo baahiyahaaga kala duwan. Waan sameyn karnaa ka saarida miridhku ...
Shandong Kunda Steel Co., Ltd. Waxay ku taal magaalada Liaocheng, gobolka Shandong, oo ah magaalo bilic leh waxaa loo caleemo saaray 'Oriental Venice'. Liaocheng oo ku taal galbeedka gobolka Shandong, 200Km Koonfurta magaalada Beijing, 100Km galbeedka Jinan City.Jiqing Expressway waxay ka gudubtaa magaalada Bariga ilaa Galbeed; Beijin ...
Saameynta sababaha sida hagaajinta dhaqaalaha gudaha iyo rajada rajada laga qabo koritaanka dalabka, sicirka biraha gudaha ayaa keenay koror guud guud ahaan dhowaan. Iyadoo aan loo eegin inay tahay rebar loo isticmaalo dhismaha, ama birta loo isticmaalo gawaarida iyo guriga a ...
Wasaaradda Maaliyadda iyo Maamulka Canshuuraha ee Gobolka ayaa si wada jir ah u soo saaray ogeysiis: Joojinta canshuur celinta dhoofinta ee wax soo saarka biraha qaarkood laga bilaabo 1-da Maajo, 2021-ka Shabakadda Warbaahinta Shiinaha, Beijing, Abriil 29 (Weriye Zhang Shengqi) Sida ku cad bogga Wasaaradda Maaliyadda. ...
Waxaa lagu soo waramayaa in saameynta ay ku yeelatay xayiraada Kanaalka Suweys oo todobaad socday awgood, in la xaddiday awooda maraakiibta iyo qalabka ee Aasiya. Toddobaadkan, xaddiga xamuulka qaada ee konteenarrada Aasiya iyo Yurub si aad ah ayey u kordheen. ” Abriil 9-keedii, Ningbo Container Freight Index (...
Isbedelada qiimaha birta
Bishii Maarso, qiimaha birta gudaha ayaa doortay inuu mar kale kor u kaco dabayaaqada Maarso ka dib markii uu la kulmay isbedello naxdin leh oo heer sare ah. Gaar ahaan, laga bilaabo 26-ka Maarso, waa maxay macquulka ka dambeysa in la doorto wax-qabad kor u kaca ka dib isbeddellada dhawaanta ee biraha? Iyo waxa dhici doona kadib ...
2020, Sicirka suuqa birta Shiinaha ayaa marka hore hoos u dhici doona ka dibna kor u kici doonaa, iyadoo isbeddello weyni socdaan oo kor u kacayaan
Marka la gaaro sannadka 2020, sicirka suuqa birta Shiinaha ayaa marka hore hoos u dhici doona ka dibna kor u kici doona, iyadoo isbeddello weyni socdaan oo kor u kacayaan. Marka la gaaro Nofeembar 10, 2020, isugeynta qiimaha birta qaran waxay noqon doontaa 155.5 dhibcood, koror 7.08% ah isla muddadaas sanadkii la soo dhaafay. Xarunta culeyska culeyska ayaa kacday. Baahida macaamiisha ...
Iskaashiga Dhaqaalaha ee Buuxda ee Gobolka (RCEP)
Tani waa guul u soo hoyatay dhinacyada badan iyo ganacsiga xorta ah. Cudurka faafa wuxuu ku faafay aduunka oo dhan, ganacsiga caalamiga iyo maalgashiga si aad ah ayey u yaraadeen, silsilada sahayda ee silsiladaha warshadaha waa la xannibay, iyo caalamiyeynta dhaqaalaha ayaa la kulantay ka hortag hadda, iyo hal dhinac oo ah ...
Ganacsatada birta iyo kuwa ku xeel dheer warshadaha ayaa saadaaliyay in suuqa birta uu sare u kici doono mustaqbalka dhow
Maalinta Qaranka ka dib dalabka birtu waa mid xoogan, suuqa birta ayaa la filayaa inuu sare u kaco mustaqbalka dhow. Sida laga soo xigtay ganacsatada birta ah iyo kuwa gudaha ka shaqeeya. Baarka hadda jira, gariiradda duuban ee kulul. Gariiradda qabow ee duudduuban iyo saxan dhexdhexaad ah iyo noocyo kale oo gaar ah oo isbeddello kala duwan wata. Marka la eego gogosha bar ...